Iza ilay Bouddha?
Ny Buddha dia adika hoe "mifoha", "manazava". Noho izany dia afaka milaza ny olona rehetra izay nahatratra ny "fahalavorariana ara-panahy". Ny cosmology bodista dia manonona zavaboary maro toy izany, fa Gautama-Buddha no tena solontenany.
Iza ilay Bouddha sy ny filozofia?
Raha mitodika any amin'ny hevitra fototra momba ny Bodisma ianao - iray amin'ireo fivavahana iraisam-pirenena telo, azonao takarina fa ny Bouddha dia tsy andriamanitra. Mpampianatra iray izay afaka mitondra zavamia-tsaina avy ao samsara - ny tsingerin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana eo amin'ny tontolo izay voafetra amin'ny karma. Ilay voalohany tonga tamin'ny fahazavana ary nahita ny tontolo tahaka an'i Siddhartha Gautama. Izy no voalohany, fa tsy ny farany. Ny finoana dia toy ny fotopampianarana izay tsy miankina amin'ny finoana, fa amin'ny fahalalana sy ny fampiharana azy. Afaka mamerina ny lalan'i Bouddha ny tsirairay na dia tsy manana finoana tsotra aza. Ny zavatra tena ilainao hinoana ny Bodista dia ny lalàna, fa ny antony rehetra dia misy fiantraikany, ary ny zavatra hafa rehetra dia azo sokajiana amin'ny fandinihana sy ny lojika, ary koa amin'ny zavatra niainanao manokana.
Na izany aza, ny Bodisma dia misy karazana fivavahana maro: tempoly, fombafomba, vavaka, minisitra. Misy hevitra tsy azo valiana amin'ny fomba fijerin'ny siansa, ohatra, ny fitsanganan'ny Bouddha. Ao amin'ny Bodisma dia tsy misy zavatra toy izany, fa misy ny vatana vaovao indray . Izany hoe, ilay olona voatifitra dia mandalo mankany amin'ny ambaratonga ambony. Ankoatra ny fisaintsainana ao amin'ny fanao Buddhista, dia ampiasaina ny mantras, ny prostrations, ny mandala. Ary ireo sekoly samihafa dia manao fombafomba isan-karazany: amin'ny sasany, ny fanamafisana dia miara-miasa amin'ny vatana, ary amin'ny hafa amin'ny fanatsarana ny fanahy.
Ny lalana fahavalo an'ny Bouddha
Misy ny zavatra toy ny lalana valo amin'ny Bouddha. Ity no làlana navoakan'ny Bouddha ary mitarika ny fampitsaharana ny fijaliana sy ny fanafahana an'i samsara. Izany fomba izany dia ahitana ireto fitsipika valo manaraka ireto:
Fahendrena izay ahitana ny fomba fijery mety. Izy io dia ahitana fahamarinana efatra ambony - ny fijaliana, ny faniriana, ny faniriana ary ny fampitsaharana ny fijaliana - ny lalana valo ety. Ny famerenana azy ireo dia afaka mifindra any amin'ny toeran-kafa ao amin'ny fampianarana ianao, miaina ao anatiny ary mahatsapa.
Ny fikasana marina. Anisan'ny fahendrena koa izany, ka ny fambolena ny hatsaram-panahy amin'ny zava-manan'aina rehetra.
Ny fitondran-tena, anisan'izany ny lahateny marina. Ny Bouddha tena izy dia tsy mitsahatra mandainga, miteny teny maharikoriko sy manevateva, mamongotra tsaho sy manendrikendrika, miresaka adaladala sy tsy firaharahiana.
Ny fitondran-tena koa dia ahitana fihetsika tsara. Ny Bodista dia tsy mety ho mpangalatra, mpamono olona. Tsy mandainga izy, tsy misotro toaka ary tsy miteraka lozabe. Ankoatra izany, nomena vahaolana ho an'ny olom-boafidy ny olona voatokana.
Ny fitondran-tena no fomba fiaina marina . Voalohany indrindra, ny Bodista dia mandà ny asa izay mahatonga ny fijaliana amin'ny zavamananaina hafa. Ny fivarotana andevo sy mpivaro-tena dia tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo entana voarara, varotra sy famokarana fitaovam-piadiana, famokarana hena, varotra ary famokarana zava-mahadomelina sy alikaola, tombom-barotra, hosoka.
Fananarana ara-panahy, anisan'izany ny ezaka tsara. Midika izany fa tokony hiezaka ny hanana fifaliana, fiadanana ary fahatoniana. Mifantoka amin'ny fahatsiarovan-tena, ny ezaka, ny fifantohana, ny fanavakavahana ny dharmas.
Ny fitsipi-pifehezana ara-panahy ihany koa dia ny fiarovana tsara, izay azo avy amin'ny fampiharana smrti sy sati. Manampy izy ireo hahatsapa ny vatanao, ny fahatsapanao, ny sainao ary ny sainy, ka hanesorana ireo toe-piainana mahatsikaiky.
Ny fananarana ara-panahy koa dia mifototra amin'ny fifantohana marina. Izany no fisaintsainana lalina na dhyana. Manampy amin'ny fanatanterahana ny fandinihina farany izany ary mba ho afaka.
Fahaizana fanampiny amin'ny daty nahaterahana
Fanaovana herisetra ara-nofo
Olona roa natrehina Janus - iza no angano?
Misy fefiloha ve?
Nymphs - tompon'ny natiora amin'ny angano
Slavy sy ny dikany
Semargle - andriamanitry Slavy taloha
Famantarana ny mpamosavy amin'ny vehivavy
Orinasa ara-pananahana any amin'ny lambo ary ny fitsaboana tranainy
Ireo vokatra izay mandoro ny voany
Provence style chair
Nanaisotra ny malalany i Chloe Kardashian
Ahoana ny fametrahanao ireo jirikitsy amin'ny varavarankazo plastika?
Leukoplakia ao amin'ny banga - soritr'aretina sy fitsaboana
Ahoana ny fomba hanamboarana voankazo masiaka?
Ahoana no hisafidianana kiraro?